Na maro ary ireo mpamadika nitsoaka tamin’ny HVM dia raha amiko manokana aloha dia hitako, fa vao maika miotmbo ny herin’ny HVM satria niala ilay hahi-dratsy teo aminy eh.
7 septembre 2018 à 8 h 17 min
Tsy ny fialàn’ny olona vitsivitsy akory no ilazana hoe mitsipozipozy ny HVM, fa vao maika aza zany mampitombo ny herin’izy ireo satria niongotra ny tsiparifary @ vary eh!!!
Ny HVM dia tsy mba mitovy amin’ny MAPAR na koa ny TGV fa izy ireo dia olo-mendrika avokoa ary tsy mba nahitana afera maloto ny olona mandrafitra azy.
7 septembre 2018 à 14 h 55 min
Ny antoko HVM dia tsy mijoro hoan’ireo karazan’olona fotsiny fa manana ny foto-keviny hijoroany izy ary mandroso foana ny asa na dia misy miala aza. Tsy sakana ho an’izy ireo arak’izany ny fialana’ireo olona sasany tao fa vaomaika aza nataony hery hisondrotana izany
Ny fialan’ireo mpamadika ireo mihitsy no vao maika mampijoro ny HVM satria niala ny tia tena sy mpamadika.